Febraayo 23, 2017 3:08 b 0
Boosaaso, Feb 23 2017-Kulan wanaagsan waa maalinimo Khamiis ah kusoo dhowaada barnaamijkii duhurinimo ee xulashada Daljir, waxaana xarunta Daljir ee magaalada Boosaaso maanta kasoo jeedinaya Weriye Maxamuud Cabdi Ibraahim.
Isgaarsiin waa Golis. Isgaarsiinta gayigeena. Adeeg casri ah yuu ku seegin adna ha seegin oo ha ka maqnaan baraha bulshada. GOLIS, isgaarsiinta gayigeena! GOLIS KU DOORO HAL ABUUR IYO HORUMAR JOOGTA AH!
DHEGEYSO-Magaalada Qardho oo laga hirgeliyey Nootaayo sharci ah.
DHEGEYSO-Ra’iisul wasaaraha magacaaban oo aqbalay xilka loodhiibey